Igwe Ngwá Ọrụ & Ntanetị Eletrọniki - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (Ụdị oge // TSO // CAMPUS RUGGEVELD)
& TECHNIC TECHNICAL ELECTRICAL
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > STEM> Engineering & Technology > Nkà na ụzụ & usoro ntanetị
Na zuru oge TSO ọzụzụ Electrical Engineering & Ọdụdọ nwụnye usoro ịchọta eletrik na teepu nwụnye ma kwadebe onwe gị maka ọrụ ndị ọrụ nchịkwa na mpaghara ọkụ eletrik. Ọzụzụ a siri ike ihe omume mana ọ na-enyekwa gị usoro ndabere. Na nyocha anyị dị oke oru ngo arụ ọrụ. Nke a na ya na ụlọ akwụkwọ na mmụta ebe obibi.
Na Ihe Nlekọta 2e Ihe eji enyere gị aka mụta itinye ihe ọkụkụ na ọkụ ọkụ, wụnye windboards, dina eletriki eletrik, ịchọpụta ma dozie ntụpọ. Ị jikọọ ihe ọkụrịrị dị iche iche na ihe ịrịba ama dị iche iche dịka AREI ma tinye nrụnye eletrik nke aka ha. ị na-eguzobe ụlọ nrụpụta eletrik na nke kpochapụla (nke na-enweghị mgbagwoju anya) ma rụọ nlekota ego.
Na Ihe ntinye 3e ihe omuma nke omuma nke 2e ka aga eme ka omimi ma gbasaa. Ị ga-enwe ike nyochaa ọrụ ọrụ, gụọ ihe osise ma mee nha. Nghọta, nwughari ma ọ bụ nrụzigharị nke nrụnye ọkụ eletrik, ma a na-atụle akụkụ dị mgbagwoju anya nke ebe obibi obibi. A ga-azụ gị dị ka onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ ọkụ eletrik. Ị ga-amụta usoro ndị dị mkpa nke akụrụngwa ụlọ, motọ, usoro PLC, njikwa, njikwa na ịchịkwa nkà na ụzụ.
Ị nwere mmasị na nrụnye eletriki na igwe? Ị ga-emekwu ihe bara uru karịa usoro okwu? Ị na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na nke onwe ya ma ị nwere anya maka nkọwa?
Ị nwere ike ịmalite mgbe niile na usoro ihe ọkụkụ, ma ọ bụ ezie na ihe ọmụma nke ọkụ eletrik na ígwè ọrụ dị iche iche. Ọzụzụ ahụ dị irè kama ikwu okwu, ma ọ dịghị elelị akụkụ nke nhazi na-akọwa ihe omume a!
Mgbe nhazi 3e Electromechanics ị nweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị. Omume a na-enye gị ntọala siri ike ịmalite ọmụmụ ihe dị elu n'ime ọzụzụ. Ị nwere ike ịmalite dị ka onye na-arụ ọrụ, onye na-elekọta ọkụ eletrik ma ọ bụ onye ọrụ, mana enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ị ga-achọta ozi ndị ọzọ gbasara ọmụmụ ihe ọzọ mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a ebe a.
Gaa ebe a na-akụzi ihe gbasara nkuzi TSO.